Oniversite : Rava ny fakiolte DEGS -
AccueilSongandinaOniversite : Rava ny fakiolte DEGS
Oniversite : Rava ny fakiolte DEGS
Rava ny DEGS eny amin’ny oniversite Ankatso. Nanomboka omaly, natokana ny fakiolten’ny lalàna sy ny siansa politika fa tsy miaraka amin’ny sampam-pampianarana toekarena sy fitantanana ary ny sosiolojia intsony, raha nitambatra izany teo aloha teo. Ny fahamaroan’ireo mpianatra manaraka io lalam-piofanana io eny amin’ny oniversite no voalaza fa antony nandraisana ny fanapahan-kevitra. Eo ihany koa ny fampiharana ny politikam-panjakana mikasika ny fampianarana ambony. «Manaraka ny politikan’ny fitondram-panjakana mikasika ny fampianarana ambony no nanovana ny fakiolte DEGS ho fakiolten’ny lalàna sy siansa politika andaniny, ary fakiolten’ny toekarena, fitantanana ary sosilojia etsy ankilany. Efa betsaka ireo mpianatra misafidy io lalam-piofanana io ka lasa isan’ ny fakiolte ny departemanta lalàna. Ny fampianarana no hiova voalohany, hisy lalam-piofanana roa amin’io fakiolte io dia lalàna ary ny siansa politika. Oniversitem-panjakana ny oniversiten’Antananarivo, dikan’izany misokatra ho an’ny olon-drehetra fa tsy ny zanaky ny mpanam-bola ihany no afaka mianatra. Ny fampianarana lalàna sy siansa politika dia manana anjara toerana lehibe amin’ny oniversitem-panjakana, ary ny oniversiten’ Antananarivo no oniversite voalohany teto Madagasikara, ka rariny raha izy no hisy lalam-piofanana lalàna sy ny siansa politika », hoy i Faratiana Herisoa Velomandroso, tompon’andraikitry ny lalam-piofanana lalàna eny amin’ny oniversiten’Antananarivo.
Marihina fa efa ny taona 2013 no nivoaka ny didim-panjakana tokony hampiharana ity lalam-piofanana momba ny lalàna sy ny siansa politika ity, kanefa izao vao tanteraka taorian’ny fisian’ny adihevitra lalina. Anisan’ny fangatahan’ny mpianatra maro teny amin’ny oniversite ihany koa ny nanokafana izany. « Hanatsaran-javatra ny fisian’io. Tsy mitsaha-mitombo ny mpianatra aty amin’ny oniversite, ary ireo mpianatra ireo misy hetahetany koa. Maro dia maro ny mangetaheta hanao izany siansa sy politika izany. Hita amin’ny zava-misy eto amintsika fa ilaintsika izany. Ilaintsika izany tanora manam-pahaizana momba ny siansa politika izany, mba hanova ny fanaovana politika eto amintsika, satria mila fahaizana ny politika. Rehefa miteny politika dia raisiny amin’ny endrika hafa nefa zavatra siansa. Mba hamaly izany hetahetan’ny tanora sy ny hetahetan’ny firenena izany no nanaovana izao fanekena izao. Efa tamin’ny 2013 no nivoaka ny didim-panjakana momba azy ity fa ny fampiharana azy izay vao tody satria be dia be ny adihevitra tao anatiny tao”, hoy indray ny minisitry ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, Rasoazananera Marie Monique.
Ny Filoham-pirenena teo aloha, Rajaonarimampianina Hery kosa no ray mpiahy ity andiany voalohany amin’ity lalam-piofanana vaovao ity. Nambarany fa toerana natao hanamafisana ny fandresen-dahatry ny tsirairay eto amin’ny firenena izany lalàna izany. “Enga anie, mba ho toerana izay tena hanamafisana ny fandresan-dahatry ny tsirairay sy ny faharesen-dahatra tsirairay amin’ny tena ilana ny fanarahan-dalàna eto amin’ny firenena. Ny fanarahan-dalàna tsy hoe zavatra hianarana fotsiny fa zavatra iainana ary zavatra hampiharina. Ekeko fa izay no zava-dehibe amin’ity androany ity (omaly), satria entina hanamarihana izao zavatra izao ny lanjan’ny fampianarana lalàna eo amin’ny sehatra ny fiarahamonina sy ny firenena, ka ny faniriako dia mba hitondrany izao toeram-pampianarana izao fivoarana eo amin’ny lafiny ara-toe-tsaina sy ny fahalalana ary mba hahatonga azy ity ho toerana tena hamolavolana tanora izay hitondra ny firenentsika eo amin’ny fisandratana”, hoy ny Filoha Rajaonarimampianina. Notokanana omaly teny amin’ny oniversite Ambohitsaina izay sampam-pampianarana vaovao izay, tsy hijanona eo fa mbola hiitatra amin’ireo oniversite any amin’ny faritany koa.
Mampametra-panontaniana hatrany ny fomba atao ahazoana ny fahatokisan’ny rehetra eo amin’ny fitantanana ny zotram-pifidianana. Satria raha tsy azo ny fahatokisana, dia zava-poana ihany ny ezaka fanatsarana rehetra. Hatramin’izay tokoa mantsy dia voakiana hatrany ny vaomiera ...Tohiny